Kooxda Boko Haram oo soo bandhigtay videoga gabdhihi ay ka qafaashen Chibok – The Voice of Northeastern Kenya
Kooxda Boko Haram oo soo bandhigtay videoga gabdhihi ay ka qafaashen Chibok
starfmke August 14, 2016
Kooxda boko xaraam ee ka dagaalanta waddanka Nigeria ayaa waxa ay soo bandhigtay videoga gabdhihi ay deeganka Chipok 2 sano ka hor ka qafaashen waxana ay kooxda sheegtay in qaar kamid ah gabdhihi ay qafaashen ay wali nool yihiin halka qaarka kalena ay ku geeriyooden duqeymaha dhinaca cirka ee kooxda lagu qaadi jiray.
Kooxdan ayaa waxa ay 276 gabdhood ka qabsadeen school ay dawladda Nigeria maamulkiisa gacanta ku heysay kaas oo ah dugsi sare oo ay gabdhaha wax ka bartaan oo kuyaala magaalada Chibok habeenimada 14-ka biisha April sanada 2014-ka waxana durbadiiba ka soo baxsaday 57 kamid ah gabdhihi la qafaashay.
Videogaas ee ay soo saartay kooxda maanta oo axad ah ayaa waxa ka muqday nin isu sheegay in u yahay ruuxa xilka kala wareegay hoggaamiyaha hore ee kooxda Abubakar Shekau waxana u baaq u diray dawladda in ay soo deyso dagaalyahanada boko xaram oo ay maxabiis ahaan u heysato.
Horaanti biishan ayay ahayd marki kooxda isu magacaawday dawladda islaamka ee ISIL ay shaaca ka qaaday in ay hoggaamiye cusub kooxda u magacaawday kaas oo badalaya Abubakar Shekau oo ah hoggaamiyihi xilkaas haayay tan iyo sanadi 2009-ka waxana hoggaamiyahaas cusub magaciisa ay ku sheegtay Abu Muscab al-Barnawi.
Mudadi 7-da sano ahayd ee u xilka haayay Abubakar Shekau ayaa waxa lagu soo waramaya in dad kor u dhaafaya 20,000 oo qof ay dileen kooxda boko xaraam halka 2.2 milyan oo qofna ay guriyahooda ka barakaceen.
Talaabada gabdhahaas lagu qafaashay ayaa ahayd mid dawladda Nigeria iyo militariga dalkaas u soo jiiday in la dhaleceeyo in ay ku guuldareesten in ay gabdhahaas ka soo furtaan gacanta dagaalyahanada Boko Xaraam.
← Shirkada korontada ee dalka oo bixineyso magdhow dhan 41milyan oo shilin
Dagaala dib uga qarxay waddanka koofur sudan →